Vina ho amin’ilay 11 Jona 2011 – MyDago.com aime Madagascar
Tsy maintsy hisy «didy vaovao»
Manahirana ny mamaky izay voasoratr’ireto vondron’ny SADC ireto. Rehefa tena tomorina tsara dia tsy mbola nandrafitra « tondro zotra » izany ry zareo hatramin’izao. Marina fa efa nodinihin’ny fivoriana tany Windhoek ilay narafitry ny Dr SIMAO, kanefa raha izao fihetsiny hanome fehin-kevitra any Sandton Afrika Atsimo izao dia azo antoka fa hisy « didy vaovao » no hampianariny ny firenena malagasy sy izay te-hitondra eto mandritra ny tetezamita iraisana.
Tsy azo antoka ny haneken’ny mpanao politika rehetra tsy hisy mitsipaka, ilay efa vita rangopohy teny Ivato, satria ireo rehetra tonga tany Gaborone dia mbola samy nanoratra ny vetsovetsony avy ho fanatsarana indray ny fomba hitantanana ny tetezamita iraisana. Samy manaiky kosa ny rehetra fa tsy misy afa-tsy ny fifidianana handraisan’ny rehetra anjara no vaha-olana. Tsy maintsy hokarakarain-dRajoelina ny fodian’ny filoha roalahy taloha raha tiany ny haha-filohan’ny tetezamita ny tenany, noho izany. Tsy maintsy miditra sy mandray anjara amin’ny andri-pitondran’ny tetezamita ireo mbola tsy nandray anjara tamin’izany, ka hisy ny fanamboarana (ifotony) ny andri-pitondrana rehetra (restructure). Rehefa manaiky ireo rehetra ireo ny mpanao politika Gasy tsy an-kanavaka, vao hirosoana ny fiarahana amin’ny fanaovan-tsonia. Izany hoe : Fandravonana ny hevitra rehetra noraisin’ny Sadc no hiseho amin’ny Asabotsy izao. Dia ho avy ny tian-kano ,tsy tian-kano ka raha miara-manaiky ny mpanao politikantsika dia mivaha ny Krizy. Fa raha ny mifanohitra amin’izany kosa dia mbola ny omaly tsy miova ihany.
Tsy manaiky ho resy
Samy mbola hifananasa vangy ihany izany isika rehetra hatramin’io asabotsy io. Ary rehefa handre indray ny « didy vaovao » dia mety mbola hizara roa farahafaratsiny, ka ao ny hidradradradra fa hampiharo tsy misy fepetra, ary hisy koa ny tsy hanaiky fa aleo ihany ilay taloha (na ny dinan’i Maputo, na ny tondrozotra narafitr’i Simao). Koa rehefa hanaiky ho resin’ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy maintsy manaiky ny fanampahan-keviny (?) Sa mety mbola azo hatao indray ny mifamory tsy mila an’ireto hery vahiny ireto ? Hampodio daholo ireo rehetra any ho any dia avohay ny nogadraina dia azo antoka fa hitombo laza ny mpihazona ny fahefana e ! Iza indray no sahy hanakiana ny fihetsiny amin’izany ?
Alohan’ny 26 jona
Auteur Ony RambeloPublié le 8 juin 2011 8 juin 2011 Catégories Malagasy, Politique
4 réflexions sur « Vina ho amin’ilay 11 Jona 2011 »
8 juin 2011 à 18 h 13 min
Rehefa mody SEM Ra8 ka misy miantoka ny fiarovana ny ainy dia efa zava’dehibe ho an’ny ankamaroan’ny vahoaka hananana fanantenana.
Hoy SEM Ra8 hoe, mila ny firaisankina ny raharaham-pirenena.Saingy nitombo an’isa ny adala notarihin’ny TGV.
Midika izany fa misimisy ihany ny tsy ampy hazon-damosina.
Noho izany dia ilaina ka tena ilaina mihitsy ny fitsikerana eo anivon’ny TPI, fa mila faizina ny tsy vory saina rehetra.
Misaotra ny avo ny malagasy fa mbola misy olon-kendry saro-bidy.
Aza omena tsiny kosa aloha ny Gasy raha somary misintaka kely e!maka bahana izy e!sady
isika koa mora mionona loatra dia izao mitarazoka izao,eo ihany koa ny mpitarika izay manao
ny hataony , mino aho fa rehefa ho avy dada, tsy ho azo ho tohaina io fa izay sis no mba any toky sy azo
hantenaina,eo ihany koa ny fitadiavana ,ny harerahana ,ny fahakiviana , »aiza ihany? » ny FONOKA moa tsy
lazaina intsony,ny » famonoana afo » etsy andaniny koa sns……
8 juin 2011 à 19 h 12 min
fa aiza daholo ny malagasy maro an’isa izay volana maro be izay ?
Nakaiza ny malagasy ny kilasy sosialy isanisany no tsy hita eny amin’ny Magro ?
Ireo izay mihevitra fa hilamina ho azy ity raharaha ity dia manohy miaina toy ny isan’andro ?
– menatra be ve izy ireo raha mijoro toy ny mpitolona rehetra
– sa ilay miandry vonona fotsiny eo andatabatra dia mandrapaka
– tsy tahotra aloha e ! angamba tsy te handrera-tena satria tia-tena
Raha vory lanina ny tsy faly rehetra efa ela ity krizy ity no vita, saingy indrisy
Izao izy ity milalotra satria Sem Ra8 sy ny GTT ary mpitolona Magro miasa irery.
Ny sisa tsy hita tabilao,
tsy tokony mila miova ve ny toe-tsaina ny malagasy ?
Aoka ho fantatr’ireo izay tsy mihetsika, ireo tsy sahy mitsangana sy manohitra an’izao fanagejàna mahazo ny vahoaka izao, aoka mba ho tonga ao an-dohan’izy ireo fa fanohanana ankolaka an’ireo mpamadika Tanindrazana sy mpanongam-panjakàna, ny ataony !!
Raha ireo any ambanivohitra, na koa ireo tsy dia nahita fianarana, no tsy dia mihetsika nohon’ ny tsy fahafantarany laotra ny Lalàna, mbola azo atao ny tsy manome tsiny an-dry zareo !
Fa izay nandia fianarana kosa, ary tsy miraika satria mbola afaka mihinan-kanina sy misotro THB na Wilson, na Aberlour rehefa te-hisotro, dia izy ireo no anisan’ny fanetriben’ny firenena !
Nul ne peut vivre heureux ( ou à l’aise ) dans un milieu hostile !!!
Et pour les profiteurs, biens mal acquis ne profitent jamais !!!
Marina dia marina ny anao ry Elas, saingy indrisy, 27 mois izao, mbola eto ihany !!
Précédent Article précédent : Andry Rajoelina est resté sans qualité aux yeux de l’Union Africaine à Gaborone.
Suivant Article suivant : Socio-politico-économique Gasy